अाफ्नी प्रेमीकाको यस्तो अचम्मको बानी जब प्रेमीले थाहा पाए … प्रेमीको होस उड्यो ! - Babal Khabar
एजेन्सी । एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रेमिकाको बारेमा अनौठो कुरा सुनाए ।
ती युवकका अनुसार उनकी प्रेमिका महिनामा एक पटक मात्रै नुहाउँथिन्, जसकारण उनको शरीरबाट दुर्ग’न्ध आउँथ्यो । उनी एक्लै सोफामा सुत्न बा’ध्य भएका छन् ।
मिरर यूकेका अनुसार प्लाटफर्म Reddit मा एक युवकले आफ्नो गोपनियता कायम गर्दै प्रेमिकाको उक्त आनीबानी बारे खुलासा गरेका हुन् । ती युवकका अनुसार उनकी प्रेमिका १५ दिनमा एक पटक नुहाउँछिन्, अर्थात् महिनामा केवल दुई पटक मात्रै । यसकारण उनको शरीरबाट धेरै दुर्गन्ध निस्कन्छ, जुन उनी सहनै सक्दैनन् । Reddit मा उनले विगत ३ वर्षदेखि ती युवतीसँग सम्बन्धमा रहेको खुलाएका छन् ।
सुरुमा उनीहरु दुवै अलग रहन्थे । जब उनीहरुले सँगै बस्ने निर्णय गरे, तब प्रेमीले प्रेमिकाको बानी थाहा पाए । ती युवकले भनेका छन्, ‘म उनलाई प्रेम गर्छु, तर मलाई थाहा थिए न कि उनी समयमा नुहाउँदिनन् । उनी हरेक दोस्रो हप्तामा एक पटक नुहाउँछिन् ।’
युवकका अनुसार जब उनले यो विषयमा कुरा गरे, प्रेमिका रिसाइन् । त्यसपछि कयौँ दिनसम्म दुवैले एक अर्कासँग आँखा जुधान समेत सकेनन् । उता युवकको Reddit पोस्टमा कयौँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले ब्रेकअप गर्न सुझाव दिएका छन् भने कतिले प्रेमिकालाई थप बुझ्न सल्लाह दिएका छन् । यो अर्को खबर तपाईले समलिंगी विवाह त सुन्नुभएकै होला । तर, रुखसँग विवाह पक्कै सुन्नुभएको छैन होला ।
अस्ट्रेलियाका एक महिलाले पुरुषसँग होइन रुखसँग विवाह गर्ने फैसला गरेकी छिन् । एम्मा नामकी महिलाले रुखको नाम टिम राखेकी छिन् ।उनले कुनै पुरुषको साथमा भन्दा रुखसँग सम्बन्ध राखेकोमा खुशी भएको बताएकी छिन् । एम्माले कुनै पुरुषले दो’स्तीको रुपमा अफर गरेपनि आफुले अस्विकार गर्ने जानकारी दिएकी थिइन । उनको यस्तो फैस’ला पश्चात परिवारले कुनै प्रतिक्रृया भने दिएको छैन ।
एम्माको रुखसँग विवाह गर्ने फै’सला सुनेर चिकित्सकले उनलाई डेंडोफीलिया नामको रो’गबाट पी’डि’त भएको बताएका छन् । यो रो’गका बि’रामी रुखप्रति यौ’न आर्कषण हुने गर्छन् ।यसै कारण एम्माले रुखसँग विवाहको योजना गरेको बताइएको छ । साभार गरियको खबर ।
Prevयी महिला रुखसँग विवाह गर्दै, कारण जान्नु भयो भने पर्नुहुनेछ छक्क !
nextकिन देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सपना ? यस्तो छ कारण